ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ စပိန်ဘောလုံးနည်းပြ | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
အထူးကဏ္ဍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု နောက်ဆုံးရသတင်းများ အားကစား ပြည်တွင်း
စပိန်နိုင်ငံ၊ မာလာဂါမြို့အခြေစိုက် အက်သလက်တီကို ပေါ်တာဒါ လူငယ်အသင်းရဲ့ နည်းပြလေးဟာ ကိုရိုနာရောဂါပိုး တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ဆေးရုံမှာ ကုသခံနေရစဉ်မှာပဲ အသက်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စပိန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကိုရိုနာကြောင့် (၅)ဦးမြောက် သေဆုံးသူ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အသက်အငယ်ဆုံး သေဆုံးသူလည်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အသက် (၂၁)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ဖရန်စစ္စကို ဂါစီယာ ဟာ (၂၀၁၆)ခုနှစ်ကတည်းက အက်သလက်တီကို ပေါ်တာဒါ အသင်းကို နည်းပြ ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတာကြောင့် မာလာဂါ မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်ဆုံး တင်ပို့ခဲ့ရတာပါ။
Spanish football coach Francisco Garcia dies of coronavirus, aged 21 https://t.co/DjCkw1QFBQ
ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်း ဂါစီယာအနေနဲ့ သွေးကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာတွေကို ထပ်မံပြသခဲ့ကာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ အဖြစ်များတယ်ဆိုပေမယ့် လူငယ်တွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ဂါစီယာ ရဲ့ အဖြစ်က သက်သေပြခဲ့တာပါပဲ။
"He wasavery good boy andavery good coach. We're still inastate of shock." Francisco García is one of the youngest victims to die from COVID-19. Rest in peace. #TrendingOnHITZ
— HITZ (@hitzdotmy) March 16, 2020
အက်သလက်တီကို ပေါ်တာဒါ အသင်းက ဂါစီယာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အသင်းအနေနဲ့ ဂါစီယာရဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းရကြောင်းနဲ့ ဂါစီယာဟာ ကံမကောင်းစွာပဲ သူတို့ကို စွန့်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်။
ပေါ်တာဒါ အသင်းရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ သူတို့ရဲ့ ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြမှုကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အသင်းနဲ့ (၄)နှစ်ကြာ လက်တွဲခဲ့တဲ့ နည်းပြလေးအတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုကို ဖော်ပြနေကြပါတယ်။
Desde el Atlético Portada Alta queremos manifestar nuestro más profundo pésameala familia, amigos y allegados de nuestro entrenador Francisco García que nos ha dejado, por profunda desgracia, en el día de hoy. ¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamosaseguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo , pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamosaolvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre.
ဆီဂန်ဒါပြိုင်ပွဲကို ဆင်းပြီး ကစားနေရပြီဖြစ်တဲ့ တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် မာလာဂါအသင်းကလည်း ဂါစီယာအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ကြေညာချက်ကို သူတို့ရဲ့ တွစ်တာအကောင့်ကနေ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ အတူ လက်တွဲကြိုးပမ်းသွားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ ဗိုင်းရပ်စ်ကို နာမည်ကြီး ဘောလုံးသမားတွေရော၊ နည်းပြတွေပါ ခံစားနေရတာမို့ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေလည်း ကောင်းမွန်ပါစေကြောင်း ပရိသတ်တွေက ဆုတောင်းနေကြပြီး ဥရောပတစ်ဝှမ်းက ဘောလုံးပွဲတွေလည်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကသောင်းကနင်းတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး သူရဲကောင်းများကို AYA SOMPO ငွေကြေးထောက်ပံ့မည်
နေအိမ်မှာ အဝတ်ဗလာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ UFC တိုက်ခိုက်ရေးမယ်ရဲ့...
သေဆုံးလူနာတွေနဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေကို ဂုဏ်ပြုပြီး တရုတ်တစ်နိုင်ငံလုံး...
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19)Francisco Garcia